Emotion – Healthy Life Journal
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး အလီနော်တို့ဟာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ညခုနစ်နာရီလောက် ဆုံတွေ့ပြီး ညစာစားကြဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်မှာ အစည်းအဝေးရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ချိန်းထားတဲ့ နေရာကိုရောက်ဖို့ အတော်လေးနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ကို ကျွန်တော် တစ်နာရီကျော်နောက်ကျပြီး ရောက်သွားတဲ့အခါ...
အလုပ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သီးသန့်ဘ၀ကြား ဟန်ချက်ညီမျှမှု ရှိရဲ့လားဆိုတာကို လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်စေဖို့ အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်ပါ။ မေးခွန်း (၁) နေ့တိုင်းအလုပ်ခွင်ကို ရောက်တဲ့အခါ ဒီနေ့လုပ်ရန်ဆိုတဲ့ စာရင်းဇယားဟာ ရှည်လျားလွန်းလို့ ပြီးမြောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ခံစားနေရသလား။ မေးခွန်း (၂) သင့်အနေနဲ့ အိမ်ကိစ္စတွေအတွက်...
သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့  မထင်မှတ်တဲ့ ကူညီမှု
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒီနေ့ည ညစာစားဖို့ ရှော့ပင်းမောလ်တစ်ခုမှာ ပီဇာတစ်ချပ်သွားဝယ်ခဲ့တယ်။ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ရှေ့ မှာ ၀ယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ပုံတပင်နဲ့ ငွေရှင်းဖို့စောင့်နေခဲ့တယ်။ ဈေးဝယ်တွန်းလှည်းထဲမှာ သူဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်စိတ်ပျက်လက်ပျက် ရေရွတ်မိသွားတယ်။ “အကြာကြီး...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သားလေးထူးခြားဟာ မိခင်နဲ့အတူ အိမ်လည်သွားပါတယ်။ အိမ်ရှင်က ချိုချဉ်ဘူးတည်တော့ သားလေးထူးခြားက မစားတာနဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်မှာ ပုလင်းဖွင့်ပြီး- “သားကြိုက်သလောက် ယူသွား . .သား” ထူးခြားက လုံးဝမယူ။ “သားစားချင်ရင် ယူလိုက်လေ”လို့ မိခင်က...
အနည်းဆုံး သူ့အတွက်တော့ ထူးခြားသွားပါတယ်….
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တဲ့ ဆွမ်းပွဲစွန့်တဲ့အခါ ပုရွက်ဆိတ်တွေတက်နေတာကို ဒေါ်မြက တစ်ကောင်ချင်းဖယ်ရှားနေတယ်။ (မဟုတ်ရင် ဆွမ်းပွဲကို စားတဲ့သူပါးစပ်ထဲ ပရွက်ဆိတ်တွေ ၀င်ကုန်မှာလေ) ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးလူအေးက မြင်တော့- “ပုရွက်ဆိတ်တွေကအများကြီး၊ တစ်ကောင်ချင်းဖယ်နေတော့ကော ရှိရှိသမျှ အကုန်လုံးကို ဖယ်နိုင်မှာမလို့လား၊...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– နိဒါန်း စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း (Fantasy) ဆိုတာဘာလဲ။ အတွေးဖြင့်ကြည်နူးခြင်း၊ နေ့လယ်အိပ်မက်မက်နေခြင်းလို့လည်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်ရရှိနေသလို စဉ်းစားခန်းဝင်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေမယ့် အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့...